Guqula imifanekiso ibe yivector-Geofumed
Ikhaya/cadastre/Guqula imifanekiso ukuya kwi vector
Ngexesha elidlulileyo, iitafile zedijithali zaziyindlela yokuphuma kwiimephu eziprintiweyo, emva koko kwafika iskena, nangona umsebenzi ungasetyenziswanga kuphela kwiimephu eziskeniweyo kodwa ezinye zaguqulwa zaba ngumfanekiso okanye i-pdf kwaye asinayo ifomathi ye-vector.
Inkqubo endiza kuyibonisa isebenzisa iMicrostation Descartes, kodwa kunokwenziwa okufanayo ngayo nayiphi na enye inkqubo: I-AutoDesk Raster Design (Eyayifudula iyi-CAD eWalekeneyo), ArcScan, GIS asibonise (Izixhobo zoShishino), ndiyakhumbula ukuba ixesha elide ndiyenza ngeCorel Draw.
Kukho izinto ezimbalwa ezihamba ekwenzeni i-vectorization inokwenzeka ngaphandle kweentloko ezincinci. Phakathi kwezi ifomathi yomfanekiso, i-png okanye i-tiff iya kunika iziphumo ezingcono, ngelixa i-jpg iphantse ingenzeki; Isisombululo apho yathunyelwa khona nayo inefuthe, kuba ukuba ibiguqulwe isuka kushicilelo okanye imodyuli yokuthumela ngaphandle, ngesiqhelo iya kuba nesikali esihambelana nobungakanani bephepha, ubukhulu bephepha, isisombululo esingcono okanye iimeko ezingcono okungenani kunezilula. isikrini sokushicilela.
Umzekelo endiza kuwusebenzisa yi-1: 1,000 imephu ye-cadastral eyathunyelwa ngaphandle kwimodyuli yokuprinta ye-Microstation, kwiphepha le-24"x36", kwifomati ye-tiff.
Imephu efana nale ilula kwi-georeference, njengoko inezilungelelaniso kumda. Ndizobe amanqaku ndisebenzisa umyalelo "indawo yendawo”, kwaye ingena kwi keyin ulungelelwaniso kwifom "xy=xcoordinate, ycoordinate", lawo ngamanqaku aluhlaza kumfanekiso ongezantsi.
Emva koko ndibize umfanekiso wereferensi, ndiwubeka kancinci ngaphandle kwezo ndawo. Emva koko ndibeke amanqaku afanayo kumbala owahlukileyo, ndidibanisa imigca eluhlaza, ndihlala ndisebenzisa ubukhulu obugqithisiweyo ukwenzela ukuba babonakale. Kwaye ekugqibeleni ndisebenzisa "hlela, warp" ukusuka kumphathi we-raster, ndisebenzise amanqaku amane okulawula njengoko kubonwe kumfanekiso. Kuya kufuneka ngoku ukwazi ukwenza i-vectorize kwisikali.
Nangona i-Microstation V8i isekela ukubiza ifayile ye-pdf njengomfanekiso kwaye ingaba yi-georeferenced kunye nenkqubo engentla, inkqubo ye-vectorization ayisebenzi njengoko idinga amalungelo okubhala. Kuyakufuneka ukuyilayisha, kwaye uyigcine njengomfanekiso (iqhosha lasekunene, ndoloze...).
Ndisebenzisa iMicrostation Descartes V8i. Nangona oku kusebenza okufanayo kunye neenguqulelo zangaphambili.
Vula izixhobo ze-Descartes. Kuba siyayenza le ntoizixhobo, raster, lahla raster hlela” kwaye ebonisa ibha enezixhobo ezisisiseko zokusetyenzwa komfanekiso.
Siza kwenza umsebenzi kwibhloko ye-15 ukuchaza izicatshulwa into enokuyenza:
Khetha ulusu. I-icon yokuqala ikuvumela ukuba wenze iimaski, ngokusekwe kwiikhrayitheriya, kule meko ndiza kusebenzisa imibala, ebonisa ukuba ndifuna ukongeza iorenji kwimaski. Kufuneka usondele kumbindi womgca, kwaye ukhethe ibhokisi kwindawo apho umbala ubonakala ucaba. Ukuqwalasela umbala ofuna ukuwubonisa imaski, yenziwa ngokhetho "Incoko yemaski yombala” Kwimeko yam ndinyule eluhlaza. Kwakhona kunokwenzeka ukwenza izikhumba ezininzi kwaye ugcine izicwangciso kwi-.msk format
Ngoko nangoko into ekhethiweyo kwimaski itshintsha kumbala obonisiweyo (oluhlaza). Ungongeza eminye imibala kwimaski enye, okanye uyisuse.
Vectorize izangqa. Siza kwakha izangqa ezibonwa kumanani ebloko, kuba oku kusicela iradiyasi kwaye ke kufuneka sichukumise umgca wesangqa ngasinye. Ilula kakhulu, ndisebenzise umbala wemagenta kunye nobukhulu obaneleyo kwizinto ezibonakalayo. Kufuneka uchaze ubuninzi bobubanzi bomgca, oku kwenziwa ngokulinganisa umgama odlula ububanzi bomgca kumfanekiso. Ukulawula okungcono, kuyafaneleka ukuyixelela ukucima into evectorized emfanekisweni.
I-Normalization. Ukunqanda ukwenza ii-vertices ezininzi ngenxa ye pixelated, into eqhelekileyo yabelwe. Umzekelo ungowona ungaqhelekanga, jonga indlela imigca echatshazelwa ngayo yi-pixelation.
Vectorize imida ngetopology. Ngoku ndifuna ukwenza idijithali imida, ukuba ndenze imaski ngokwahlukileyo kwimida yebhloko ndiza kuba nengxaki yokuba abayi kuba nokucoceka kwe-topological kwimida yangaphakathi yomda. Ukwenza oku ndongeza umbala we-orenji kunye nombala omnyama kwimaski, emva koko ndichukumisa ii-vectors ngokwahlukileyo. Uphawu kukuba zonke ziya kubekwa kumbala wemaski, emva koko zichukunyiswe kuphela usebenzisa ukhetho "guqula imigca"
Kulula, yiloo nto. Bona iinkcukacha ezandisiweyo, ukuba ii-nodes ziye zaqatshelwa ngokugcina ukuhambelana kwe-topological kwi-vertices, ii-nodes zingagcinwa njengefayile yefomathi ye-nod. Unokukhetha utshintsho lombala okanye inqanaba nanini na ufuna, yile nto ndiyenzileyo ukwahlula umda webhloko kwipropathi nokuba usebenza ngemaski enye.
Guqula umbhalo. Kule nto kukho ezinye izixhobo, ezikuvumela ukuba ukhethe okuthe tye, okujikelezisiweyo, okubhaliweyo okuninzi, phakathi kwabanye, usebenzisa i-OCR. Ekunene kukho ukuguqula iibhloko (iiseli).
Olunye uKhetho lweVector. Nje ukuba kusetyenziswe imaski, phakathi kwemisebenzi enokuthi isetyenziswe yile:
4. Guqula imigca ibenye
5. Guqula yonke indawo enefreyimu ibe yibhokisi
6. Guqula zonke izinto ezidityanisiweyo kwimephu
7. Yakha imigca yecontour, ifuna ukuba kwifayile yembewu ye-3D.
8. Yakha izangqa
9. Yenza lula i-vectors, le yeyomgca wemigca enamacandelo amaninzi kakhulu
ukuchaneka. Ndilinganise umgama ukusuka phambi kwenombolo yepropathi ye-2, kwaye indinike i-28.9611 yeemitha, i-original yayiyi-29.00, i-vectorizing ngeenyawo yayiya kuba yinto efanayo, kodwa ngokukhawuleza, kunye netafile yedijithali bekuya kuba kubi kakhulu. Kolu chanekileyo, izinto ezininzi kufuneka ziqwalaselwe, njengomgangatho
d yokuskena, ukuba iphepha alizange lonakaliswe, umlinganiselo wemephu, umgangatho we-pixelation kwaye ngokukodwa i-georeferencing yecandelo lesi-2 lesi sithuba.
Ukuba unomfanekiso wemibala emibini, okanye ungxamile, kuyenzeka ukuba wenze i-vectorization enkulu, nangona koku kufuneka uthathele ingqalelo imiba ethile:
Ukuba imephu iqulethe imida kuphela, xa uvavanyo lwesiqhelo lwenziwe, lunokwenziwa ngendlela elula.
Ukuba imephu inemibhalo, eyona nto ilungileyo kukuguqula ezi kuqala, emva koko ngezixhobo zokucoca umfanekiso susa okushiyekileyo okumdaka.
Ukuba sisikena sombala, kunye neskeni esamkelekileyo, njengephepha le-cartographic 1:50,000, kunokwenzeka ukwenza oko ngombala, kunye nokwenza iimaski ngamagama aluncedo (imigca yecontour, izakhiwo, iindlela, igridi, njl.) ukwazi ukuyifaka ngokuchanekileyo, iyunifomu kwimifanekiso eyahlukeneyo.
Xa unamaphepha aqhubekayo, kuyakhethwa ukuba uwabize omabini, wenze ulungelelwaniso olunokwenzeka ukuze adibane kwaye enze i-vectorize ibe namaphepha ahlukeneyo akhethiweyo.
Kuyacetyiswa ukuba kuqhutywe uqwalaselo olulandelayo, ngakumbi kwiindawo ezidityanisiweyo kunye neendawo ezikufutshane kakhulu kwimigca.
Ingeosolum iphehlelela incwadana yeendaba
Kuhle kakhulu ndiyathemba ukuba isebenza nge-8.5 kuba iya kubaluleka kakhulu.